सद्‌गुरु: अङ्ग्रेजी अभिव्यक्ति, "फलिङ्ग इन लभ" वा "प्रेममा पग्लिनु" सान्दर्भिक छ, किनकि कोही पनि प्रेममा माथि उक्लिँदैनन् वा प्रेममा विशाल बन्दैनन् । तपाईं प्रेममा पग्लिनुपर्छ, किनकि तपाईं जो हो, त्यसको केही अंश नष्ट हुनुपर्छ । तपाईंको सम्पूर्ण हिस्सा नगएपनि, कम्तीमा तपाईंको एउटा अंश समाप्त हुनैपर्छ । तबमात्र त्यहाँ प्रेम सम्बन्ध हुन्छ । तपाईं अर्काको निम्ति आफ्नो केही अंश नष्ट गर्न इच्छुक रहनुपर्छ । मूलत: यसको अर्थ यो हो कि तपाईंको निम्ति स्वयं आफूभन्दा अर्को व्यक्ति निकै बढी महत्त्वपूर्ण भएको छ । दुर्भाग्यवश, अधिकांश मानिसहरूको निम्ति "प्रेम" एक–आपसको लाभ योजना भएको छ ।
तपाईं प्रेममा पग्लिनुपर्छ, किनकि तपाईं जो हो, त्यसको केही अंश नष्ट हुनुपर्छ ।
कुनै सर्त बिना प्रेम हुन्छ ?
तपाईं बाहिरी संसारमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सदैव अनेकौँ सर्तहरूले निर्धारण गर्छन् । तर, प्रेम भित्री अवस्था हो— तपाईं आफूभित्र कस्तो हुने भन्ने कुरा निश्चय पनि कुनै सर्त बिनै हुन सक्दछ ।
उदार भाइहरूको कथा
"मैले यति गरेको छु" भन्ने बकवास छोड्नुहोस् ! यदि तपाईंले कसैबाट केही पनि अपेक्षा राख्नुभएन भने, तपाईंले सहज रूपमा जीवन बिताउनु हुनेछ ।
प्रेम— जीवनको नाजुक आयाम
प्रेम— आवश्यकताको रूपमा
प्रेमको नाममा तपाईं आफूभित्र असाध्यै असहाय र अपूर्ण बन्नुभएको छ ।
रानीको प्रेम कहानी
यदि तपाईंले हरेक चीजलाई प्रेमपूर्वक हेर्न सक्नुभयो भने, तपाईंको अनुभवमा सम्पूर्ण संसार सुन्दर बन्नेछ । तब तपाईंलाई यो बोध हुनेछ कि ‘प्रेम, तपाईंले गर्ने कुरा होइन; प्रेम, तपाईं आफूभित्र हुने तरिका हो ।'